LG yakarova Samsung muhondo yekugadzira OLED skrini yeApple Watch | Ndinobva mac
Kusvikira nhasi, hapana munhu ane kusahadzika nazvo Samsung ndiyo inogadzira OLED skrini inopa mhando yepamusoro pamusika. Muchokwadi, yaive iyo yakasarudzwa neApple kugadzira mapaneru eOLED izvo zviripo parizvino muiyo iPhone X. Zvisinei, yakanga isiri iyo sarudzo yekugadzira iyo OLED skrini yeApple Watch.
Sezvo isu tichigona kuverenga muBusiness Korea, inosanganisira mushumo kubva kukambani yekuongorora IHS Markit, chikamu cheGG chinotarisira kugadzirwa kwemapaneli, LG Ratidza, yakapihwa huwandu hwemamiriyoni gumi emamiriyoni emamiriyoni eApple Watch, ine mugove we10.64% , nokudaro achiva mutengesi mukurusa.
Kune chikamu chayo, mugadziri Samsung, akapa 8.95 mamirioni mayuniti, achiwana mugove wehuwandu hwe34,8%. Iyo Everdisplay Optronics kambani yaive nebasa rekugadzira 4.17 mamirioni mapaneru (16,2%), AUO yemamiriyoni 1.47 (5,7%) uye BOE, iyo yaigadzira 380.000 OLED-mhando skrini dzeApple Watch.
Hatizive chikonzero nei LG yakapfuura Samsung muchikamu chino, nepo chete iyo yekupedzisira yakapihwa basa rekugadzira zviyero zveiyo iPhone X, pasina kuverenga chero nguva neyakaitwa yeKorea ye LG Ratidza uye vamwe vese vagadziri vanga vachiona nezvekupa iwo maOLED mapaneru eApple Watch.
Kunyangwe iyi data, zvese zvinoratidza kuti Samsung ichave zvakare iri mukutora kutora mirairo yakawanda yeiyo iPhone nyowani, kuhwina kurwa ne LG Ratidza zvakare, kunyangwe hazvo LG iri kushanda zvakanyanya kuti ikwanise kubata Samsung, asi parizvino zvinoita sekunge iri kure nzira.
Zvinoita sekudaro mhando yemhando inodiwa neApple paunenge uchigadzira mapaneru eOLED ye iPhones, ivo vachiri kusvika kune LG. Zvinotaridza kuti kuzvipira kwaApple kuLG, nekumisikidzwa kwevatariri vanosvika pamusika kutsiva mamodheru akagadzirwa neApple, hakuzo pfuura ipapo, zvirinani izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » LG yakarova Samsung muhondo yekugadzira OLED kuratidza kweApple Watch
Vashandi veApple vanozove ne1Password account uye sevhisi iri runyerekupe kuti riwanikwe
Iyo HomePod haizombove iri iPhone yevakangwara maspika